Misy ny SEO ve?
Tamin'ny taona 2017, nanjary lasa sehatra ara-barotra goavana ny SEO. Androany, ny fanavaozana ny milina fikarohana dia tsy resaka fametrahana loharanon-karingan'ny mpikaroka fotsiny. Ho an'ny fahatakarana tsara kokoa ny momba ny SEO, tokony ho fantatra aloha ny fomba fiasan'ny media sosialy SEO.
Efa voamarina fa ny fifandraisana amin'ny media sosialy dia ampahany manan-danja ao amin'ny tranonkala avo lenta. Ny famantarana ara-tsosialy dia mety hampitombo ny SEO misy anao.
Izany dia miasa toy izao: ny habetsaky ny fiarahamoninao sy ny fandraisana andraikitra dia endriny manan-danja amin'ny lanjany sy ny kalitao misy anao - old computer parts san francisco. Ambonin'izany, ny votoatin'ny media sosialy dia matetika hita ao amin'ny valin'ny Google Search. Izany no antony mahatonga ny tetikasa goavam-be, taranja Twitter manaraka sy ny fifandraisana amin'ny votoatin'ny marika dia tena mahasoa ho an'ny orinasanao.
Amin'izao fotoana izao, ireo manam-pahaizana momba ny Semalt dia hilaza aminao ireo toro-hevitra mahomby indrindra ho an'ny tetikasanao SEO Twitter. Ampiharo azy ireo amin'ny fampiharana ny fanarahanao ny fiainanao sy ny raharahanao.
Twitter Zava-dehibe ny SEO Tokony ho Fantatrao
1. Ny fampivoarana tetik'ady SEO mahomby
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mamolavola drafitra stratejika mahomby. Raha ny fitsipika, manomboka amin'ny tanjona ankapobeny ny paikady. Farito ny tanjonao voalohany amin'ny famaritana ny valiny azonao amin'ny fampiasana Twitter ho an'ny varotra. Angamba, miezaka ny manentana ny fanentanana ny marika, mivarotra tolotrasa vaovao na mampitombo ny fifamoivoizana amin'ny blaogy?
Rehefa vita ny famaritana ny tanjonao, ny dingana manaraka dia ny mifidy sy manandrana ny tetika mety indrindra mba hahatratrarana ireo tanjona ireo.
2. Mifantoka amin'ny feon'i Brand
Tadidio: ny sioka tsirairay dia maneho ny marikao. Izany no mahatonga ireo hafatra nalefanao tweet tsy maintsy mahatoky hatrany ny feon'ny marikao, misolo tena ny marika famantarana anao. Ataovy azo antoka fa manintona ny mpihaino anao izy ireo.
Zavatra iray manan-danja iray hafa dia ny fanitsiana - fanitsiana ireo bitsikao tsy natao fotsiny ho an'ny fialana fa mandra-paha-100% azonao antoka fa ny bitsika tsirairay dia maneho ny tsipiriany rehetra tianao hizarana amin'ny mpanjifa.
3. Mitombo hatrany ny fiarahamonina
Tsy misy mandà izany raharaha lehibe izany. Na izany aza, rehefa tonga amin'ny Twitter, ny fifamotoana dia mpanjaka. Ampahafantaro ny mpanaraka anao ny votoatiny, fa miezaha hiala amin'ny paikady mora vidiny - tsy mendrika ny fampiasam-bola izy ireo.
Fa manomboka ny baolina mandroso ary manohy izany mihetsiketsika amin'ny fisarihana ny roa: mpanaraka ankehitriny sy mety. Manomboka amin'ny famoronana votoaty sarobidy izay tian'ny olona hizara sy hizara. Zavatra iray hafa dia ny mamaly - mamaly ireo fanontaniana sy fanehoan-kevitry ny olona, ​​mamaly ireo bitsika mivantana. Aza adino ny mamerina mamaky teny, mametraha ny taratasinao.
4. Mifidy ny tsara indrindra
Zava-dehibe ny hahatonga ny votoatinao mora hita. Tokony hitovy amin'ny karoka fikarohana rehetra ny Twittero. Andramo ny fampiasana ny teny fanalahidy manan-danja ao anaty sioka tsirairay. Aza adino ny tenifototra, bio, ary ny lohateny - azony atao koa ny manampy ny pejy Twitter anao.
Tsarovy fa amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny olona dia mitady Twitter amin'ny teny fanalahidy. Noho izany, tandremo fa ny kaontinao dia maneho ny zavatra manan-danja amin'ny orinasanao.
5. Mitady ny fifamoivoizanao amin'ny Twitter
Araka ny filazan'izy ireo, inona ireo fepetra tsy mitombo. Tsy mbola nitodika tany amin'ny analytics Twitter ve? Avy eo dia aleo mandeha haingana toy izany haingana araka izay tratra mba hahazoana sary avy hatrany ny fomba ataonao ary ny hitazomana ny herinanao isan-kerinandro.
Ny Google Analytics koa dia afaka milaza aminao ny habetsaky ny pejy mitsidika anao amin'ny Twitter. Ity fahalalana ity dia hanome anao ny fahatsapanao ny habetsaky ny fifamoivoizana azonao jerena ao amin'ny Twitter.
Fantatsika fa toerana feno olona ny Twitter. Mamorona hafatra izay hahatonga anao hijoro amin'ny fifaninanana. Arovy ny votoatiny sarobidy sy mora vakina. Ambonin'ny zava-drehetra, ataovy mahaliana sy ilaina izany, satria izany no fomba fiasan'ny SEO Twitter.